Zokuvala ukugqobhoza isinxibelelanisi is used with low voltage ABC cables with insulated aluminum conductors up to 6 KV.
I-IPC elilandelayo uluhlu olubanzi isixhobo kwe-IPC ezinye Jera kaThixo.
Le isinxibelelanisi ixesha elide kakhulu yaye lula ufakelo kwimigca ezonga izikhwebu, umbane ezitalatweni kunye nezakhiwo. Ayifuni abicah igrisi, ukuze ungangenwa.
Ifanele ababhexeshi ephambili okanye isebe ne-alumuniyam okanye ubhedu iingcingo, ezo isetyenziswe kufakelo guards, ngexesha aphantsi umrhumo nokuqina.
Buyaqhubeka, N * m
Ukufakelwa kwalo Isidibanisi ombane ephantsi Kulula kakhulu ngenxa imnyama icala emazantsi, nto leyo efanelekileyo nitrogen yi utsalo.
Low izihlanganisi ukugqobhoza ombane zigqunyiwe ukuba kudlule mvavanyo ngokwesi EN 50483, amava intsebenziswano kunye amaqondo ezisuka - 60 ° C ukuya ku +60 ° C test, lobushushu ibhayisikile test, ukuguga uvavanyo, umhlwa ukumelana test njl
IPC zenziwe UV thermoplastic enganyangekiyo, uye tin wambu amazinyo, kunye hardware steel stainless
abathengi bethu wazingqina kwizinga eliphezulu le lv ABC kufaneleka.
Ezinye izihlanganisi ukugqobhoza kunye ombane aphantsi nokufakwa iintamboziyafumaneka nokuba ngokwahlukeneyo okanye kunye nebandla.
Thina yonke ikhithi lwezincedisi intambo le mfuneko.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ukuba ulwazi olungaphezulu
Previous: Anchor Screw uhlobo pigtail PS-7
Okulandelayo: Eye wonk yokwambathisa EF-16
Xa igqunyiwe nokugqojozwa Connector ZOP-52
Zokuvala ukugqobhoza isinxibelelanisi
Low izihlanganisi ukugqobhoza ombane zigqunyiwe
ombane aphantsi isikhokhelo nokuqina